Isiqulatho seCartridge esisecaleni se-china-Abavelisi beCarlos base-inline abavelisi, abaXhasi
Icebo lokucoca ulwelo lokucoca amanzi amakhulu namancinci i-t33 yokusetyenziswa kwamanzi ikakhulu isetyenziselwa ukuhluza okokugqibela. Yenziwe ngomgangatho ophezulu weqokobhe lekhokhonathi eyenziwe yasebenza ngekhabhoni okanye iqokobhe leapricot, ngaphandle kwempuphu yokuncamathelisa, kwaye igcwaliswe ngokuthe ngqo kwisilinda secartridge yesixhobo sokucoca amanzi. Ukutywinwa kokusebenza kwecartridge yeefilitha kulungile kakhulu. Icartridge yokuhluza enkulu kunye encinci ye-t33 yokucoca amanzi inomsebenzi olungileyo wentengiso ye-organic, inokususa ngokufanelekileyo ivumba elikhethekileyo kunye nentsalela yeklorini emanzini, kwaye inokwenza ukuba amanzi acociweyo acoleke, acace, abonakale kwaye angcamle ngcono. Xa kuthelekiswa ne-cartridge yecebo lokucoca amanzi elincinci le-t33, ubude be-t33 enkulu yi-27 cm, ubude be-t33 encinci yi-25 cm, kwaye i-t33 enkulu iyatyeba kwaye inde. Imodeli yokusetyenziswa inezibonelelo zokuhamba kwamanzi amakhulu kunye nobomi benkonzo ende, kwaye ubomi benkonzo ngokubanzi iphindwe kabini ukuya kathathu kunaleyo encinci ye-t33.
Isihluzi sePp Meltblown Cartridge, Kk Isihluzi seCartridge, Kk Gac Cto Isihluzi seCartridge, iCartridge yokucoca amanzi, Iifilitha zamanzi zeNdlu iphela, Icebo lokucoca ulwelo emgceni,